लोग्ने भनेको स्वास्नीको शरीर बलियो हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ ! – AB Sansar
November 19, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on लोग्ने भनेको स्वास्नीको शरीर बलियो हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ !
आफ्नी छोरीले से; क्स गरेको पत्ता लगाउन बाबुले ‘भ; र्जिनिटी टे; स्ट’ गराएपछि…
September 1, 2021 September 2, 2021 Ab-संसार